Pavlovskiy Gleb Olegovich। विस्तृत जीवनी, फोटो
समाचार र समाज, पत्रकारिता
भाग्य सुखद र अप्रिय आश्चर्य प्रस्तुत। अक्सर दैनिक गतिविधिहरु टाढा प्राप्त र एउटा नयाँ, आफ्नो बाटो फेला पार्न प्रयास गर्न चाहन्छु। आफ्नो भाग्य हरेक मानिस आफूलाई सिर्जना गर्छ। कसैले जानाजानी, जबकि अरु - यो रूपमा। आफ्नो जीवन मा Pavlovskiy Gleb Olegovich, एक विस्तृत जीवनी माथि र तल, hairpin bends र inexplicable zigzags संग replete छ philosophically देखिन्छ।
प्रसिद्ध ओडेसा Pavlovskiy Gleb Olegovich देखि Hailing। 1951 जन्म unremarkable थियो। तर मिति मार्च5आघात मा धेरै नयाँ मित्र परिणाम हो। नयाँ जीवनको सुरुवात रूपमा समकालीनहरूको द्वारा कथित थियो stalin मृत्यु, एक दिन पछि।
आमाबाबुले Hleb - एकदम साधारण मान्छे। पिता थिए architect एक पेशा। उहाँले एक डिजाइन इन्जिनियर रूपमा काम गरे। आफ्नो रेखाचित्र को काला सागर ओडेसा देखि Batumi गर्न सुविधा को marinas। आमा एक विदेशी विशेषता मौसम विज्ञान थियो। त्यो ओडेसा मौसम स्टेशन मा काम गरे। कार्यस्थल मा, केटा आमा पूर्वानुमान कसरी गरिन्छ देखे।
1958 मा, केटा नियमित उच्च विद्यालय पठाइएको छ। एक बच्चाको रूपमा उहाँले स्पष्ट एक नियम सिकेका: तपाईं आफैलाई प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। पहिलो पटक पाँच वर्ष मा एक भावना थियो। त्यसपछि पौडी खेल्न आफ्नो छोरा सिकाउन प्रयास गर्ने बुबा डक गर्न केटा फाले। आफ्नो मुख र नाक भरिएको, र पछि त्यो नुन पानी किशोर सडक झगडे बेला स्मृति मा डामर। तथापि, Gleb Pavlovsky राम्रो विद्यार्थी थियो। ग्रेनाइट विज्ञान सजिलै उहाँलाई दिइएको थियो।
परिवार पढ्न प्रेम गर्नुभयो। पुस्तक तिनीहरूले एक deity मा बदल्यो, जताततै थिए। को लिखित शब्द को पंथ ताव पढेर गर्न पुगे। Zhukovsky गरेको काम किन्न र यो परिवार मा पढ्न सम्भव थियो र, छोटो कथा रूसी र विदेशी क्लासिक, र सबै। निष्कर्ष र निष्कर्ष ककटेल रगत stirs। केटा पिता आधुनिक जीवन बुझ्न छैन, पुरानो जमानाको, बुर्जुआ देखिन्थ्यो।
1968 मा Gleb प्राप्त एक उच्च विद्यालय उपाधि। एकल वा तीन chetvortki छैन थियो। जवान अघि थप बाटो विकल्प को एउटा प्रश्न छ। एउटा कुरा उहाँले निश्चित लागि थाह थियो: बाटो मा आमाबाबुको भएन। के आवश्यक थियो क्रान्तिको, योजना ओडेसा को भाग्य मा एउटा क्रान्तिमा थियो।
Pavlovskiy Gleb ओडेसा विश्वविद्यालय छनोट। इतिहास संकाय भन्दा आकर्षक जवान देखिन्थे। उहाँले चुनिएको संकाय मा कुनै पनि समस्या बिना जान्छ। एक विज्ञान रूपमा इतिहास सधैं हिजोको schoolchildren को ध्यान आकर्षित गरेको छ। उहाँले प्राचीन समयका, chronologically शैक्षिक इतिहासकारहरूले कामहरू मा प्रस्तुत थिए को संसारमा डुबुल्की मार्न गर्न मन परायो।
1968-1973 साल - ठूलो विद्यार्थी जीवनको एक अवधि। क्रांतिकारी आत्मा समय मात्र होइन हावा तर पनि संस्था को पर्खालहरु मा घुसपैठ भएको छ। 1968 को brainchild को युवा द्वारा सिर्जना क्रान्तिकारी सर्कल सकिन्छ। आश्रम विचार विद्यार्थीले आफ्नो सानो समूहमा embody प्रयास गरेका छन्। सर्कल "नेतृत्व" (ऐतिहासिक गतिविधि विषयको) भनिन्छ।
यो विश्वविद्यालय Gleb Pavlovsky को थियो पत्रकारिता पेसा मा आफ्नो हात खोजे। आफ्नो दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दा, उहाँले एक पर्खाल अखबार प्रकाशित "बीसौँ शताब्दी।" उनको अस्पष्ट अँगाले। कसैले कसैलाई प्रशंसा, बुझेनन्। विश्वविद्यालय पार्टी ब्यूरो को shorthand अभिव्यक्ति देखि यो हटाइएको छ "अराजकता लागि।" आफ्नो सिर्जनाको लागि भोगे सम्पादक, त्यो Komsomol बहिष्कार गरिएको थियो।
1973 मा, विद्यार्थी जीवन भन्दा छ। Pavlovskiy Gleb को इतिहासकार एक उपाधि, एक मानक नीलो पुस्तक प्राप्त गर्दछ। र स्कूल इतिहास शिक्षक काम गर्न जाने। पहिलो काम लामो बाँच्न सकेन। आफ्नो विशेष गरी निषेध, नयाँ पुस्तकहरू लागि आवेग, को KGB एउटा जानकारी गरायो। 1974 मा, जवान शिक्षक सम्पत्तिको र पुस्तक Solzhenitsyn गरेको वितरण पक्राउ थियो "द Gulag द्वीपसमूह।" उहाँले सबै गर्न स्वीकार, र उहाँले जारी थियो। निरन्तर स्कूल छोड्ने सोधे।
जीवन परिवर्तन गर्न, भविष्यमा घटनाहरू Pavlovskiy Gleb निर्णय को predictability को चक्र तोड्न। यो लक्ष्य हासिल गर्न उहाँले राजधानी बस्न सारियो। आफ्नो पेशा परिवर्तन गर्न निर्णय, यो एक काम विशेषता सिकर्मी बन्नेछ। 1976 देखि 1982 उहाँले जहाँ यो केवल एक काम पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ काम गरे। पनि एक निर्माण कामदार, सिकर्मी, lumberjack र - र यो इतिहासको उच्च शिक्षा सबै मान्छे छ।
यस समयमा, त्यो पाती एक kindred आत्मा मिखाइल Gefter को अनुहार मा। सत्तर र eighties को पालो मा उहाँले Hefter मुक्त samizdat पत्रिका "खोज।" स्थापित एक मास्को निवास परमिट को कमी भए तापनि उहाँले आफ्नो विद्यार्थी सह-सम्पादक लाग्छ। ज्योति पाँच संख्या आए। कि पछि, KGB साहित्यिक विभाग Valery Abramkina को टाउको पक्राउ। पत्रिकाको प्रकाशन प्रतिबन्धित र 1981 मा तल बन्द भएको थियो। Pavlovskiy Gleb र एक वर्ष र आधा पक्राउ गरिएको थियो।
जांच मिलेर लागि अदालत कोमी गणतन्त्र कैद गर्न सन्दर्भ प्रतिस्थापन। राजनीतिक शक्तिहरू को केन्द्र देखि remoteness मा तीन वर्ष रहन जीवित कमाउन जागिर पाउन। Stoker, चित्रकार - यहाँ dissident ज्ञात छ कि नयाँ पेशों छन्।
माथि लिङ्क। डिसेम्बर 1985 मा, राजधानी मा प्रत्यक्ष मा प्रतिबन्ध बावजुद, मास्को Pavlovskiy Gleb Olegovich फर्के। जीवनी र जीवन फेरि एक नागबेली बनाउँछ। एक वर्ष लुकाउने गए। सोभियत समाज एक आपराधिक रेकर्ड संग एक मानिस आवश्यकता छैन। विचार गर्न विरोध - Dissident समुदाय यसको मुख्य मन्दिरमा को desecration क्षमा थिएन। Arbat मा युवा क्लब Gleb, केन्द्रीय समाचार पत्र विरुद्ध सोभियत संघ को सबै पक्ष बाट आउँदै अक्षरहरू ह्याण्डल जो काम खोजी परिणाम। यसको आधार मा "क्लब सामाजिक पहल" (सीएसआई) बनाएको छ। Pavlovsky पाँचवटा सह-संस्थापक को रूपमा कार्य।
"XX सताब्दी र शान्ति" अनातोली Belyayev Pawlowski को सम्पादक काम गर्न लाग्छ। आपराधिक रेकर्ड संग र बिना मास्को दर्ता आत्महत्या गर्न akin छ व्यक्ति न्यानो गर्न: उहाँले जोखिमको हिंडे। देखि 1987 Pavlovskiy Gleb Olegovich - व्लादिमीर YAkovlev को नेतृत्व अन्तर्गत सहकारी भनिन्छ "तथ्य" को एक संक्षिप्त जानकारी पत्रकार।
1989 - पत्रकार, इतिहासकार, dissident एक स्वतन्त्र यात्रा मा जान्छ। उहाँले, पत्रिका "XX सताब्दी र शान्ति" पूर्वसूचना समाचार एजेन्सी PostFactum सिर्जना (तथ्यलाई पछि)।
फेरि अन्तर्गत छानबिन Pavlovskiy Gleb Olegovich 1994 को वसन्त मा। ज्ञात पत्रकार "संस्करण №1 विकास» विश्लेषणात्मक परिदृश्य आरोप लगाए। काल्पनिक कथाहरू मा राम्ररी विरोधी-राष्ट्रपति षडयंत्र को संभावना विचार गर्न।
अर्को 1995 नयाँ विचार र यसको कार्यान्वयन ल्याउँछ। यो वर्ष, प्रभावकारी नीति (Pec) फंड को सिर्जना। नयाँ संगठन राज्य Duma गर्न चुनावमा सक्रिय भाग लिन्छ। तर राजनीतिक सहमतिलाई "रूसी समुदाय को कांग्रेस" को Duma आफ्नो उम्मेदवार को पेश्की लागि वोट को आवश्यक नम्बर सङ्कलन थिएन।
1996 मा राष्ट्रपति चुनाव प्रभावकारी नीति फाउंडेशन गतिविधिहरु को प्रयोग को लागि एक विस्तृत क्षेत्र दिनुभयो। उहाँले मिडिया संग काम गर्न, चुनाव अभियान मा कर्मचारी Borisa Eltsina को मुख्य सल्लाहकार बन्नेछ।
परिवर्तन को क्याच हावा सबै सफल छैन। सधैं सक्रिय गर्न सक्छन् Pavlovskiy Gleb Olegovich सुरु गर्न सही दिशा अनुमान। रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक नवजात इन्टरनेट मा पत्रकारिता को भूमिका मूल्यांकन गर्न पहिलो हो। यो एक नेटवर्क "रूसी जर्नल" सिर्जना। मुख्य सम्पादक को स्थिति आफूलाई लाग्छ।
सूचना साइटहरु प्रेरणा र आय को अर्को स्रोत हो। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को प्रसिद्ध "Vesti.ru", "SMI.ru" र "Strana.ru" थिए। अन्तिम दुई आफ्नो व्यक्तिगत नियन्त्रणमा छन्।
आधुनिक संसारमा ठाँउ
आज विभिन्न Gleb भनिन्छ। यो एक राजनीतिक वैज्ञानिक छ र Provocateur, दार्शनिक र राजनैतिक विश्लेषक, सार्वजनिक सम्बन्ध प्रतिभा र manipulator। यो हाम्रो समय को सबै भन्दा उच्च-प्रोफाइल भ्रष्टाचार संग जम्मा गरिएको छ। आफ्नो नेतृत्वको अन्तर्गत त्यहाँ Berezovsky गरेको राजीनामा थियो। उहाँले मास्को मेयर Luzhkov को पत्नी सम्झौता गर्न लक्षित नियन्त्रण। तर मुख्य गुण को Kremlin गर्न भ्लादिमिर पुटिन को कम्पनी हुन र प्रतिस्थापन Borisa Eltsina बढाउन मानिन्छ। तर टिप्पणी, अस्वीकार वा Pavlovskiy Gleb Olegovich छैन जाँदै छ यी नियमहरूले पुष्टि गर्नुहोस्। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक यो यति महत्त्वपूर्ण छैन भन्नुभयो। उहाँलाई अनुसार, उनले आवेदन इतिहास लेख्छन्।
देश मा पहिलो मान्छे आउँदै पहिलो नम्बर एक कुरा रहिरहन्छ। राष्ट्रपति प्रशासन टाउको गर्न सल्लाहकारमा - आज उहाँले छ। राजनीतिक विश्लेषक वी वी Putinu सल्लाह गर्न सक्छन्। रूसी संघ को टाउको अनुभवी पत्रकार र इतिहासकार को सिफारिसहरू सुन्न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण Kremlin रणनीतिकार - राष्ट्रपति को एक मानार्थ शिर्षक "समय" पत्रिका मा एक सल्लाहकार थियो।
परिवार र साथीहरू
राजनीतिक क्यारियर सफलतापूर्वक विकसित गरेको छ। व्यापार booming छ। Pavlovsky उहाँले सानो गर्न सक्ने आफूलाई भन्छन्। तर आफ्नो पारिवारिक जीवन आषा अन्त्य छ। हिंसात्मक गतिविधि Gleb परम्परागत सम्बन्ध बनाउन सफल गरे।
पहिलो पटक एक विद्यार्थी अझै पनि ओल्गा Gleb Ilnitsky गर्न विवाह भएको थियो। छोरा सर्गेई wedlock मा जन्म भएको थियो। मध्य-सत्तर मा मास्को आफ्नो कदम अघि, उहाँले छोडपत्र। एक जवान बच्चाहरु संग परिवार बस्ने ठाउँ दिनुभएन। आफ्नो बुबाको अनलाइन संस्करणहरू को एक काम एक वयस्क को अब छोरा।
यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध सन्तानको बाँकी काम बाहिर छैन। पाँच जना छोराछोरी को कुल थप Pavlovskiy Gleb Olegovich छ। व्यक्तिगत जीवन र प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक र पत्रकार को क्यारियर, गतिशील विकास गरे। आफ्नो पूर्व-पत्नी संग ओल्गा धेरै न्यानो सम्बन्ध रह्यो।
त्यहाँ प्रसिद्ध स्पिन डाक्टर लागि साथीहरू को एक ठूलो संख्या। उहाँले आफ्नो पुरानो र केही विश्वसनीय comrades हेरचाह गर्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई बीच, सबै भन्दा प्रसिद्ध - वैलेन्टिन Yumashev।
पत्रकारिता - इतिहास ... र पत्रकारिता को मूल कुराहरू छ। पत्रकारिता विभाग
Anastasia Drapeko: "हरेक केटी एक ब्यालेट नर्तक बन्ने सपना"
रूसी पत्रकार रुस्लान Ustrahanov: जीवनी
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को इतिहास मा नयाँ रुप
अखबार "पूंजी उचित" (ZELENOGRAD) तपाईं नयाँ अवसर प्रदान गर्न खुसी छ
Aleksandr Gamov - राजनीतिक टिप्पणीकारले
कर्कपोका लागि आर्किड, बिरुवाको रखरखावको अवस्था
रंग मोचा मोचा: रंग, सुविधाहरू, फोटो को विवरण
Maksim KAMMERER - को Strugatsky को प्रशंसक सबैभन्दा प्रिय नायक को एक
माछा-बच्चाहरु: को राशिफल, वर्ण र रोचक तथ्य विशेषताहरु
जीवित व्यक्तिको क्रोगेनिक ठोक्किएको सम्भव छ?
रेस्टुरेन्ट "पोंटोन": छाप धेरै
टार साबुन - के को लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ?
मोन्ट्रियल Nacho - "शस्त्रागार" को रक्षक। जीवनी, पेसा
एक स्विमिंग पूल संग Anapa होटल - आधुनिक विकल्प
आधुनिक pavers: आयाम, प्रकार र प्रयोगहरू